ပြားချပ်ချပ်အမျိုးအစားသင်တုန်းဝါယာကြိုး - တရုတ် Hebei Meihua ဟာ့ဒ်ဝဲ mesh
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးပြားချပ်ချပ်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုးသင်တုန်းဝါယာကြိုးပစ္စည်း: 1. တိုက်ခန်းအမျိုးအစားသင်တုန်းဝါယာကြိုး: အရည်အသွေးမြင့် - ပူပြင်းတဲ့သွပ်ရည်စိမ်မြင့်မားတဲ့ကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုး, ပူသွပ်ရည်စိမ်အလတ်စားကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုး, သံမဏိစာရွက်ဝါယာကြိုး, etc.2; ဓားဘုတ်အဖွဲ့: အရည်အသွေးမြင့် - သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ, သံမဏိပန်းကန်။ မော်ဒယ်: အသင်တုန်းဝါယာကြိုး BTO သို့ကွဲပြားနှင့် CBT BTO BTO-10 BTO-18 BTO-22 BTO-28 BTO-30 CBT CBT-60 CBT-65 Bto-22 တရုတ်အတွက်အသုံးအများဆုံးမော်ဒယ် (အခြားမော်ဒယ်များဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်သည်ပါဝင်သည် ထို့အပြင်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ် ...
ပစ္စည်း: 1. တိုက်ခန်းအမျိုးအစားသင်တုန်းဝါယာကြိုး: အရည်အသွေးမြင့် - ပူပြင်းတဲ့သွပ်ရည်စိမ်မြင့်မားတဲ့ကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုး, ပူသွပ်ရည်စိမ်အလတ်စားကာဗွန်သံမဏိဝါယာကြိုး, သံမဏိစာရွက်ဝါယာကြိုး, etc.2; ဓားဘုတ်အဖွဲ့: အရည်အသွေးမြင့် - သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ, သံမဏိပန်းကန်။
မော်ဒယ်: အသင်တုန်းဝါယာကြိုး BTO သို့ကွဲပြားနှင့် CBT
BTO BTO-10 BTO-18 BTO-22 BTO-28 BTO-30 ပါဝင်သည်
CBT CBT-60 CBT-65 ပါဝင်သည်
Bto-22 တရုတ်အတွက်အသုံးအများဆုံးမော်ဒယ် (အခြားမော်ဒယ်များဖြစ်ပါတယ် ထို့အပြင်) စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
ဝါယာကြိုး barbed flat ဓါးဓါးဆူးကြိုးများအသစ်သော application ကိုလမ်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်တစ်ခုတည်းကွိုင်လိမ့်မည်, ပြားချပ်ချပ်သို့မဟုတ်လှပလက်တွေ့ကျတဲ့မှားအသုံးပြုမှုကိုနှိပ်ပြီးနောက်နှစ်ခုတစ်ခုတည်းစက်ဝိုင်းဓါးဆူးကြိုးလက်ဝါးကပ်တိုင်အဆင့်, ပန်းကန်ကိုနှိပ်အဆိုပါဓါးဆူးကြိုးဖြစ်ပါသည် တက်ဘလက်အကာအကွယ်နံရံများအောက်မှာတစ်ဖြောင့်မျဉ်းကြောင်း, linear ဓါးဆူးကြိုးနှင့်အတူအသုံးပြုခဲ့, ဒါမှမဟုတ်သာအသုံးပြုမှု tile ကိုဓါးစူးသောဆူးကြိုးပုံစံအကာအကွယ် walls.It လူနေအိမ်ဧရိယာများ, ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံမွေးမြူရေးမွေးမြူရေးစက်ရုံအလုပ်ရုံ, ခြံ, မိုင်း, အကျဉ်းထောင်နှင့်အမျိုးသားပြန်လည်အဓိကသက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါသည် ကာကွယ်ရေးဆိုဒ်များ။
နောက်တစ်ခု: Active ကို SNS ကာကွယ် Net က
ကွင်းဆက် Link ကိုခြံစည်းရိုးထိပ်တန်းဆူးဝါယာကြိုး
Concertina ကြေးနန်း coil
PVC coated သင်တုန်းဝါယာကြိုး
သင်တုန်း Concertina ဝါယာကြိုး